Isibonelo sokuthi umuntu ophumelelayo kufanele abe nesikhathi sokuhamba eholidini ehlobo, sithuthukile ezweni lethu ngisho nangezikhathi ze-USSR. Kodwa kuthiwani ngalabo abathi ngesizathu esithile bangahlala kuphela ekuqaleni kwekwindla? Ngempela kubalulekile ukwenqaba uhambo olwandle? Ungakhathazeki, uzoba nesikhathi sokushisa ilanga nokugeza. I-Russia engumakhelwane ne-Abkhazia ngo-Septhemba iyajabulisa izakhamuzi ezinolwandle olumnene, ukushisa okunethezeka komoya kanye nelanga eliningi.
Isimo sezulu nesimo sezulu sase-Abkhazia ngo-September
Ukuzilibazisa olwandle kuncike kakhulu ezimweni zemvelo nezesimo sezulu. Izindawo zokubhuka ze-Abkhazia ne-Krasnodar esifundeni zibhekwa njengezikhathi ezithile, ezifanele ngokuyinhloko ukuvakasha kwonyaka ngesikhathi esifudumele. Inombolo ephezulu yabanikazi beholidini iza lapha kusukela ngoJuni kuze kube sekupheleni kuka-Agasti. Kukholelwa ukuthi phakathi nalesi sikhathi kungenzeka ukuthi izinsuku eziningi zemvula neziphepho ezisolwandle ayilutho. Futhi yini i-Abkhazia engayinikeza izivakashi ngoSeptemba? Isimo sezulu sezwe singaphansi komhlaba. Inyanga yokuqala ekwindla ibhekwa njengesizini se-velvet. Ukushisa kwe-airtime yemini yansuku zonke kungama-23-25 degrees, kodwa izinsuku ezishisayo nazo zenzeka lapho izinga lokushisa lifinyelela emazingeni angu-30. Ulwandle luhlehlisa kancane kancane, futhi wonke uSepthemba ungakwazi ukubhukuda. Ebusuku akusilo kubanda kakhulu, ngaphezu kwalokho, ukupholisa kusihlwa kuyamjabulisa futhi kwenza ukuhamba emigwaqweni yamadolobha okuphumula ahle kakhulu. Ngokuqondene nezimvula, akekho inkathi ecacisiwe yemvula yase-Abkhazia. Kodwa ngokuvamile ngoSepthemba, izinsuku ezingaba ngu-10 ezishisayo ziphuma ngaphandle, kodwa zishintsha ngokufudumala, futhi ukubonakala kweholidi kule nyanga akungabonakali ukuthi kubonwe yisimo sezulu esibi.
Izivakashi eziningi ezihlela iholidi e-Abkhazia ngo-Septhemba zikhathazekile: uma isikhathi siphelile, ingabe kuzoba nezinkinga ngenhlangano yokuphila nokuzijabulisa? Futhi lokhu kwesaba akunangqondo ngokuphelele. Amahhotela amaningi kanye nezikhungo zokuzijabulisa zisebenza ku-Abkhazia unyaka wonke, njengoba ukuvakasha konyaka omusha kuleli zwe kuye kwanda kakhulu. Uma uya eholidi ngo-Septhemba, ngeke kube nezinkinga zokuhlala. Kukhona namahhovisi okuvakasha, izitolo nezindawo zokudlela. Kuyinto enhle kakhulu, ekuqaleni kwezintengo zekwindla ziwela kancane kancane. Kuyinto engenangqondo ukuwedlula inani lezimpahla namasevisi kuphela ekuphakameni kwenkathi, lapho isidingo sidlula ukunikezwa.
Abkhazia: umkhakha ozimele. USepthemba inyanga yokwamukela izivakashi ezikhethekile
Izakhamuzi eziningi zithi kumnandi kakhulu ekuqaleni kwekwindla ukuphumula emkhakheni wangasese. Abkhazikazi abamukela izihambi bayamukelwa ngokukhethekile ekupheleni kwenkathi futhi bazimisele ukuheha izindwendwe zokugcina endlini yabo. Ngakho-ke, engxenyeni yezindlu zangasese kunokuningi okumele ukhethe kuzo, amanani ayakhuthaza, futhi nabanye abanikazi ungakwazi ukuxoxa nabo. Ukuphumula e-Abkhazia ngoSeptemba kuzokuvumela futhi ukuba ubeke amavithamini kuwo wonke unyaka ozayo. Phela, sekukwindla ukuthi izithelo nemifino ehlukahlukene zivunwa lapha. Ngokuvamile, izakhamuzi eziqashisa amakamelo nezindawo zokuqashisa, zinikeza izivakashi zabo ukuzitholela mahhala noma imali yokubiza. Ungakhohlwa ukuthi ekwindla ku-Abkhazia ungakwazi kakade uzame iwayini elincane.
Yini ongayibona nokuthi yini okufanele uyenze?
Zonke izikhangiso ezidume kakhulu ziyatholakala ukuze zihlolwe ekwindla. Kulesi simo, akudingeki uchithe isikhathi eside ekushiseni noma ukhuphuke izintaba ngaphansi kwemisebe yelanga. Kuyinto enhle kakhulu - izivakashi zingaphansi kakhulu ezinyangeni zasehlobo. I-Abkhazia ngo-Septhemba ibheka okufana nehlobo, itholakala emgqeni omkhulu waseRussia kule nyanga ebonakala ngamaqabunga aphuzi nemvula. Emoyeni asezindaweni ezishisayo, ungakwazi ukujabulela imifino yezindebe kanye nezimbali zezitshalo zangaphandle. Vakashela iLake Ritsa, izigogodla nezimpophoma, thatha isikhathi sokuvakashela izingadi lezitshalo noma i- New Athos Monastery. Ekwindla konke okukhethwa kukho imisebenzi yangaphandle kuyatholakala. Ungaya ekamu, zizame ngokwama-scuba diving noma ufunde i-paragliding. Emabhishi amaningi kukhona ukuqashwa kwamagesi okubhukuda kanye nemishini ehlukahlukene yemidlalo eqinile.
Ukubuyekezwa kwezivakashi mayelana nokuhlala kwekwindla ku-Abkhazia
Abaningi bezokuvakasha banqabe ukuthatha iholide ehlobo futhi bakhetha ukuya ku-Abkhazia ekuqaleni kwekwindla. Ngalesi sikhathi, ungakwazi ukujabulela konke okujabulisayo kwezindawo zokungcebeleka zendawo, ngaphandle kokujoyina nemigqa, futhi okubaluleke kakhulu - ngamanani akhangayo. Isimo sezulu esimnandi, ithuba lokugebha olwandle futhi sibone zonke izinto - konke lokhu ku-Abkhazia ngo-September. Ukubuyekezwa kwezivakashi mayelana nokuvakasha kwekwindla kuleli zwe kuningi kakhulu. Abavakashi bajabule ngethuba lokushiya okungenani ngesonto noma amabili kusukela ekwindla ezayo emzini wabo bese behlala isikhathi sasehlobo. Kuyinto ephawulekayo, ekubeni ngo-Abkhazia ngo-September, kunzima ukukholelwa ukuthi lokhu akuyona into ethile yephutha futhi u-Agasti waphela ngempela. Abanye abavakashele ekubukeni kwabo bakhuluma kabi ngenkonzo yamahhotela athile nama-sanatoriums. Futhi lokhu kuyisizathu esibalulekile sokubheka ngokucophelela ukhetho lokuhlala ngesikhathi seholide. Ngayo yonke imingcele ye-Abkhazia ngasekupheleni kuka-Septhemba nayo inkulu kakhulu ngamaholidi, njengasezinyangeni zasehlobo.
Amathiphu kubanikazi bamaholide ekwindla
U-Abkhazia ngoSepthemba ujabulela ngesimo sezulu esifudumele, kodwa kusihlwa ngalesi sikhathi sekuvele kuphelile. Ungakhohlwa ukuletha izingubo ezifudumele nawe ohambweni. Njengoba kungekho izivakashi eziningi kakhulu - kusukela ekubhujisweni kokuqala kwezindlu kungashiywa. Kodwa uma ufuna, ungagcina ngisho nangaphezulu uma uthola ithikithi elivuthayo. NgoSeptemba kubhekwa njengenyanga enhle yokuya olwandle lwemindeni enezingane ezincane nezokuzilibazisa. Ama-sanatoriums amaningi kanye nezihlinzeko zaleli zwe nazo ziyajabula nokuwa kwamanani amaholide ekwindla kanye nezinhlinzeko ezizuzayo. Uma uhlela konke ngendlela efanele futhi uzokwazi ukucabangela zonke izinhlobo ze-hofu zeholide ekwindla, uhambo lwakho oluya e-Abkhazia ngo-Septhemba luzoshiya okubonakalayo okumnandi.
Igalari ye-Perm: umlando nezibuyekezo
Thina ubuyekeze ikhabethe ehlobo: izikhindi ukwenza kusuka jeans ezindala
Letindlela ezahlukene izigqoko wathungela
Ukulungiswa ukuze ingxube kakhonkolo. Izinhlobonhlobo, Ukucaciswa, imiyalelo